Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Martinique » Manokatra indray ny lanitra ho an'ny sidina Air Canada i Martinika
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany Martinique • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Manokatra indray ny lanitra ho an'ny sidina Air Canada i Martinika.
Ny serivisy fiaramanidina mankany Fort-de-France dia homena mifanaraka amin'ny fepetra ara-pahasalamana, mba hiantohana ny fijanonana azo antoka indrindra ao amin'ny Nosy Flowers.
Ny sidina mivantana isan-kerinandro avy any Montréal dia hiasa hanohy ny serivisy mankany Martinika miaraka amin'ny fiaramanidina B737 kilasy roa misy seza 169.
Izany dia manaporofo ny maha-zava-dehibe an'i Martinika sy ny Frantsay Andrefana manontolo ho antsika ao amin'ny Air Canada.
Ity zotra stratejika ity dia hiasa in-dimy isan-kerinandro amin'ny fiaramanidina Boeing-737 vaovao.
Niverina ny Air Canada Martinique nanomboka ny 30 oktobra, taorian'ny fahatapahana volana maromaro noho ny valan'aretina.
Ny sidina mivantana isan-kerinandro avy any Montréal (YUL) dia hiasa hanohy ny serivisy Martinique miaraka amin'ny fiaramanidina Boeing 737 kilasy roa misy seza 169, samy manana efijerin'ny tsirairay mahatsikaritra mikasika izay manome fahafahana miditra amin'ny rafitra fialamboly feno, anisan'izany ny sarimihetsika, fanadihadiana, mozika ary lalao.
“Faly izahay niverina Martinique” hoy i Alexandre LEFEVRE, Air MadagascarNy talen'ny drafitry ny tambajotran'ny Tale ambony.
“Manaporofo izany hoe hatraiza izany Martinique ary ny Frantsay Andrefana manontolo dia zava-dehibe ho antsika Air Madagascar, satria nanangana fifandraisana matanjaka tao amin'ny faritra izahay nandritra ny 45 taona mahery izao. Tahaka an'i Martinika dia toerana malaza amin'ny masoandro ho an'ny Québecers, Quebec dia toerana mahafinaritra ho an'ny Martinika mitady fialam-boly, fianarana ambony ary fandraharahana. Ity zotra stratejika ity dia hiasa in-dimy isan-kerinandro amin'ny fiaramanidina Boeing-737 vaovao. Tsy andrinay ny hitsena anao amin’ny sambo.”